I-PT-B 1940s indlwana, i-Central Park, ukuthenga, imakethe - I-Airbnb
I-PT-B 1940s indlwana, i-Central Park, ukuthenga, imakethe
Pingtung City, I-Taiwan
Ikamelo e-indlwana ibungazwe ngu-Mama Kao 高媽媽
Yakhiwa ngawo-1940, kwakuyindlu evamile ngaleso sikhathi. Izakhiwo ezindala azivamile edolobheni eliphithizelayo lase-Pingtung.
Yakhiwa ngo-1940, indlwana yendaba eyodwa elula enkabeni yedolobha elidala le-Pingtung. Njengoba idolobha lihlala liyisikhungo esisekelwe ngokwanele namuhla, lo mgwaqo omncane unamakhaya ambalwa amadala asele. Lokhu kungenye yezinto ezingavamile ezitholakala emaphandleni ase-Taiwan.
Ifenisha yasekuqaleni kanye nezinkumbulo zasendlini kusukela ngo-1940 kuya ku-1970 's ukuze kuhambisane nokubukeka kwempilo.
4.53 · 19 okushiwo abanye
Omakhelwane bethu bebelokhu beseduze amashumi eminyaka, futhi basisiza ukuba sibeke iso endlini. Sisendaweni ephakathi nedolobha lase-Pingtung, izinyathelo ezikude nezinxanxathela zezitolo, ipaki, imnyuziyamu, imakethe yasebusuku kanye nezindawo zokudlela.
Ibungazwe ngu-Mama Kao 高媽媽
Sikhuthaza izihambeli zethu ukuthi zizenze ekhaya, indlu ilungiselelwe ukuzenzela, kodwa ningithumelele umyalezo uma kukhona okudingayo noma unezimo eziphuthumayo. Umsizi wethu wendlu uhlala eduze, anganakekela izidingo zakho ngesaziso esifushane.
Sikhuthaza izihambeli zethu ukuthi zizenze ekhaya, indlu ilungiselelwe ukuzenzela, kodwa ningithumelele umyalezo uma kukhona okudingayo noma unezimo eziphuthumayo. Umsizi wethu wen…
Hlola ezinye izinketho ezise- Pingtung City namaphethelo